Maitiro ekurarama mhenyu roulette
Iwe unonyatsoda kuziva maitiro ekuona online online roulette? Verenga pamusoro uye uwane maficha e Roulette Clock Master, software yakasarudzika ne ThatsLuck!
Kuburitswa kwekutanga kweizvi roulette wachi wachi yakadzokera kumashure akati wandei apfuura, apo online kasino yekutanga yakabvumidza vatambi kubheja mushure mekunge croupier akanda bhora.
Kugara ndichiverenga nezvakanyanya kufarira zvinyorwa zvekuona kana zvekushandisa kufanotaura, saka ndakafunga kuyedza ruoko rwangu pabazi iri remutambo, ndichigadzira software yeiyo wachi yepamhepo roulette yandakatumidza kuti Roulette Clock Master.
Maitiro ekurinda online roulette ne Roulette Clock Master
Kupfuura wachi, Roulette Clock Master iri mhando yechronometer, inoedza kufungidzira kuti bhora rakakandwa necroupier rinopera kupi kumhanya kwaro kana nekurohwa kwemhepo yakamanikidzwa mune inoitika otomatiki ma roulettes.
Chirongwa ichi chinofungidzira sei izvi? Kusakwanisa iyi nzira ye roulette wachi kuverenga pachiyero chaicho chekumhanya kweiyo roulette uye bhora nekuda kwekukanganisa kwehunyanzvi kwakabatana nekutapurirana kuburikidza netiweki yeiyo rukova vhidhiyo, ndakafunga kutora chirevo chekuyera kuyera kuyera posteriori.
Kana ndikavhara vhidhiyo mushure memamirisikosi mashoma kubva pakatanga bhora uye ndocherekedza nzvimbo yeiyo roulette, bhora uye nhamba inokunda, pese pandinomisa vhidhiyo mushure menguva imwecheteyo nguva ndinoona mamiriro akafanana neakanyorwa kare, Ini ndinogona kutarisira kuti mhedzisiro yekupedzisira yakafanana kana mune chero kesi yakafanana chaizvo (padyo nemabhokisi) kune iyo yakawanikwa kare?
Mhinduro, mushure mekuyedzwa kwakawanda mumunda, ndiungu: hazvisi zvisingawanzo izvo Roulette Clock Master, zvakaenzana zvakaenzana, inofungidzira nemazvo kunyange iyo imwechete nhamba yekukunda.
Saka dambudziko riripi? Nei ndisina kunge ndiri muBahamas kwenguva yakareba ndichimhanyisa champagne pane caliente playa? Ini ndichakutsanangurira iwe mundima inotevera.
Maitiro ekuvharira online roulette nemhepo yakamanikidzwa
Kutaura nezvekumanikidza mweya roulette, mune optics roulette wachi iwo zvechokwadi akanakisa kusvika, zvese pahuwandu hwemasekondi anowanikwa muzvikamu, uye nekuonekwa maererano nekuronga kwedhisiki rinotenderera.
Nekudaro, aya ma roulettes ane mudziyo unonzi RRS, kana Random Rotor Speed.
Iyi RRS mukuita inoshandura kudzikiswa kweiyo rotor zvisingaite mushure mekuvharwa kwemabheti, kungodzivirira kuti mumwe munhu atore mukana wekubheja mushure mekumisikidzwa kwebhora.
Sarudzo yacho inoratidzwa zvakajeka mubhurocha remugadziri weazhinji eaya ma roulettes (kana iwe uchida kuziva zvakawanda, tsvaga mambure ►Cammegh Slingshot).
Saka manje? Hapana tariro yemutambi?
Ini ndingati ndisati ndasimudza mureza muchena nema roulettes aya, pamwe kumwe kuyedzwa kwemunda kunofanirwa kuongororwa, zvakare nekuti nyowani Roulette Clock Master yakanga yakagadzirirwa nechisarudzo Speed ​​Bet, nekutenda kwazvinokwanisika kunongedza pakumhanya kwakanyanya zvikamu zvakakura zvevhiri, izvo nekudaro zvinogona zvakare kugamuchira misiyano yemhedzisiro mhedzisiro inokonzerwa neRandom Rotor Speed.
Pane roulette yemuchadenga, zvisinei, gara uchishandiswa zvakanyanya, hazvireve kuti hunyanzvi hwemutengesi hunoenda kure kupfuura kungodzora rotor.
Setup Vhidhiyo uye Speed ​​Bet
Zvekugadzwa kweiyo Speed ​​Bet ndinokuendesa kune iyo posvo kana vhidhiyo pa ► YouTube software ► Roulette Turbo Clicker, mukuita maitiro acho akafanana uye zviri nyore kwazvo uye anokurumidza kupedzisa.
Kana zviri zvekutanga kumisikidzwa kwevhidhiyo, ingo vhura tafura yemutambo, sarudza zita rewindo remutambo kubva kumenyu inodonha uye tinya pane bhatani. Set, ipapo nekuda kweiyo X / Y yekubatanidza detector unogona kuona chikamu chevhidhiyo iwe yauri kufarira kutora (X Kutanga e Y Kutanga) uye saizi yeiyo yekubata hwindo (pani Kukura kweKutora).
Kana iwe uchida, iwe unogona zvakare 'kumanikidza' saizi yemutambo hwindo kuti riite zvakakwana kukwana saizi yedesktop yako (pani Hwindo Game Saizi).
Nenzira iyi, kana kunyangwe mushure mekutanga kuseta saizi yehwindo ikachinja, unogona nekungodzvanya bhatani bhatani Tweak idzore kune saizi yakasarudzwa kare (Hupamhi / Kureba).
Matekiniki ekushandisa kufanotaura
Kana zviri zvehunyanzvi (uye hwakawanda) matekinoroji ekufanotaura, kunyangwe ini ndichifunga kutarisa kwemavhidhiyo zvakanyanya, izvo zvandisingazokundikana kugadzira nekutumira pa ► YouTube, Ini zvirokwazvo ndinofunga zvinobatsira kutarisira chimwe chinhu.
Maitiro ekuvharira online roulette: roulette makiki
Roulette Clock Master yakagadzirirwa 2 seti yemamaki akasiyana, anonzi # 1 uye # 2.
Iwo # 1 akateedzera mamaki zvikwere zvakaverengwa kubva pa1 kusvika pa6 uye madiki machena macirconi, pamwe nechena bhuruu rimwe Dzinogona kudhonzwa pachiratidziri uye kushandiswa kudzikisira, semuenzaniso, zvikamu zvitanhatu zvevhiri, nepo madenderedzwa anogona kushandiswa kuzivisa akasiyana lozenges, ndiyo poindi yekukanganisa bhora risati rawira pane rotor.
Aya machena macircle anogona zvakare kuita green, ingotinya pavari negonzo.
Iyi yekutanga seti yemamaki inoshandiswa kugadzira vanamwari zvinongedzo zvikamu nekuti paunonyora maruneti ayo echokwadi ini ndinokukurudzira kuti utarise nguva dzose uchitevera homogeneous cataloging, zvichibva kunongedzera kwekutenderera nenzira yekuwacha / kuruboshwe vhiri.
Semuenzaniso, zvichave zvinobatsira kuziva kuti kana pakamira timer bhora raive padhuze neiyo yero dhotera (ona mufananidzo wekare), zero (kutsvaga pakamira vhiri) muchikamu chakatemerwa mamaki 2 -1 uye iyo inokunda nhamba (kufungidzira iyo iri 19 yakateedzerwa ne green denderedzwa) padyo nemaki 01, mune yakafanana bhora / vhiri mubatanidzwa iwe unogona kufunga nezve kubheja chikamu cheiyo manhamba gumi nemaviri kubvira 12 kusvika 3 kana mune chero kesi yenhamba iyo inomiswa ichakupa iwe mufananidzo panguva yekumira Nguva.
Maitiro ekuvharira online roulette: iyo timer
Kana ari Nguva, ingo pinda nguva yaunoda mubhokisi chairo wobva wadzvanya bhatani kutanga kutanga vhidhiyo uye chiringazuva.
Paunosvika pane yakatarwa kukosha, vhidhiyo inomira ichikubvumidza kuti unzwisise kuti bhora nevhiri zviripi uye wochinja zvinoenderana.
Iyo yese # 2 yakateedzana mamaki yakatsaurirwa kuteedzera kuhwina bhora / vhiri / nhamba.
Muchokwadi, iwo zviratidzo zveakasiyana maumbirwo uye mavara ekutendera iwe kusarudza iwo aunosarudza maererano nezvaunoda iwe pachako.
Mavara mamwe chete aya mumapoka eanomaka matatu anoshandiswa kusiyanisa imwechete kubva kune imwe.
Mukukosha, ndezve kuita izvi: kana uchinge wamisa vhidhiyo yesipinha, semuenzaniso munzira yakatarisa nguva, unoisa mucherechedzo pabhora, imwe pa zero revhiri uye imwe pane iyo nhamba iri kukunda.
Dzokorora kuvhiya kweimwe katatu kana ka3 uye wotanga kutamba, uchivavarira chete kana pakamira vhidhiyo pane mamiriro akafanana neakanyorwa maererano nechinzvimbo chebhora / vhiri.
Muchokwadi ivo varipowo dzimwe nzira dzekutamba, sekubhejera chikamu che nhamba nhanhatu chinonyanya kukanganisika pakamira kwevhidhiyo, kana zvinopesana, ndiko kuti, kutamba ichitonhorera chikamu (haina kumbobvira yarova), zvese zvakare kuitira kuti vadzokorore zvikamu zvinodzokororwa zvekutanga izvo mamwe croupiers ivo zvinonzwisisika kugadzira; kune rimwe divi funga nezvazvo ... kana mutengesi akatsiviwa paavhareji maminetsi makumi matatu, pachave nechikonzero!
Yekupedzisira muganho weiyo roulette wachi?
Mune ino yazvino vhezheni ye Roulette Clock Master Ini ndakawedzera nyowani yekuyera modhi.
Mukuita nekudzvanya bhatani DS (Mutengesi siginicha), chirongwa ichi chinongoratidzira iyo Speed ​​Bet uye pani ine 12 roulettes (Nguva 01, Nguva 02, nezvimwewo).
Maitiro ndeaya: kutanga unofanirwa kuyera iyo avhareji nguva yekukanda, ndiko kuti unzwisise mushure memamirisekondi mangani kubva kuvhurwa kwebhora vhidhiyo yacho inofanira kumiswa, nenzira yekuti uwane 'kanenge' mamwe 2 masekondi ekubheja usati wapera kubheja.
Kana izvi zvangoitwa, sarudza kuti ndeapi gumi nemaviri ma roulettes ane furemu yakakodzera kwazvo uye sarudza vhiri rakakodzera nekudzvanya.
Parizvino setup yacho yapera, ingo tanga iyo timer uye pese panomira vhidhiyo, kubheja pane chikamu chakafanana pachinzvimbo cheye rereti roulette iyo yawakasarudza kare pakati pe gumi nemaviri aripo.
Basa racho rakareruka kupfuura zvarinogona kuita, kana uine kusahadzika, ini ndinokukoka kuti utarise ipapo vhidhiyo yekuratidzira yatovepo pachiteshi ► YouTube di ThatsLuck.
Itsva Roulette Clock Master ndeye kune zvese zvinangwa uye zvinangwa murabhoritari uye, nekudaro, inokupa iwe mukana chaiwo wekugadzira nekushandisa nzira nyowani dzekuhwina kufembera, pasina hazvo kugovana navo; kubva pano, sezvaunonzwisisa, inowana kukosha kweupfumi kwakasiyana neiyo mamwe ese software anowanikwa.
Uyezve, nekuda kwerudzi rwechirongwa chakashandiswa, iyi software yeiyo Roulette wachi ichashanda zvachose, nekuti inopindirana yakanangana nechiratidziro chemutambi uye kwete necomputer software kodhi.